🥇 ukubalwa kwezimali nokulawulwa kwabasebenzi
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 237
Ividiyo yokubalwa kwezimali nokulawulwa kwabasebenzi
Oda ukubalwa kwezimali nokulawulwa kwabasebenzi
Ukulawulwa kokubalwa kwabasebenzi kuzokwenziwa kahle futhi kahle ohlelweni lwe-USU Software olwenziwe ngongoti bethu abaphambili. Ngokuya nge-accounting accounting kanye nokulawulwa kwabasebenzi, kuyadingeka ukusebenzisa imisebenzi eminingi etholakala ku-database ye-USU Software, yakha ukwenziwa okuzenzakalelayo kwemibhalo kwanoma iyiphi ifomethi nokuqukethwe. Ngokuya nge-accounting accounting ngokulawulwa, usizwa kakhulu ngethemba lokwethula amanye amathuba enqubweni yokuqapha kuhlelo lwe-USU Software system. Abasebenzi abakhona basebenzise kakhulu abasebenzi babo ngemuva kokudluliselwa kufomethi ekude yokwenza imisebenzi ephathelene nesimo esibucayi ezweni nasemhlabeni. Isimo samanje sikhubaze kakhulu zonke izingqimba zebhizinisi, asishiyi thuba ngokuya ngezinhlobo ezithile zamabhizinisi amancane naphakathi nendawo okusinda. Isimo esibhekene nalolu bhubhane sesibucayi maqondana nokwehla komnotho kwezinkampani ezingakwazanga ukulungiselela isikhwama sokulondoloza amandla okusinda esikhathini esinzima ngokusho kwawo wonke umuntu. Izinkampani ezithola okuningi kakhulu yizintsha ebezivele ziqale intuthuko yazo futhi zingenazo izimali ezingaphansi kwazo uma kwenzeka kuba nezimo eziphuthumayo ezweni nasemhlabeni. Isihloko sezepolitiki sokuxhasa osomabhizinisi, isidingo sabo sehlile nezinga lesidingo somphakathi lehla kakhulu, sadingidwa emhlabeni jikelele, singesona isidingo esiyinhloko emkhakheni womsebenzi. Kulokhu kuxhumana, ukugcizelelwa ekutholeni indlela yokuphuma kwehle ekwehliseni izindleko zibe sezingeni eliphansi futhi izinkampani zishintshela kwimodi yokusebenza ekude. Ezinkampanini eziningi, lokhu kuguquka kwemicimbi kwakuyinsindiso yangempela, njengoba kwavela ukulungisa inzuzo, ukunciphisa izindleko zokuqasha kanye nezinsiza, kanye nokusindisa ozakwabo emisebenzini ngokuhambisana nokugcinwa kwesidingo ngokusho kokukhiqizwa kwezinto eziyisisekelo zokusetshenziswa. Ukushintshela emsebenzini wokude bekungelula njengoba bekubonakala, ngoba abasebenzi abaningi, sebeshintshele kwimodi yesilawuli kude, baqala ukunganqikazi ukungayinaki imisebenzi yabo eqondile, beqhubeka nokunciphisa izinga lenhlangano. Izinhloko zamabhizinisi azikwazanga ukusishaya indiva lesi sehlakalo esikhulu futhi zaqala ukuphendukela enkampanini yethu ukusiza ngesicelo sokwenza umsebenzi owengeziwe ozosiza ekuhleleni izinto. Abasebenzi benkampani yethu babewanake wonke amaklayenti asondela futhi balalela nenqwaba yezifiso, sibonga esingakusho futhi sithuthukise ukusebenza okwengeziwe kohlelo lwe-USU Software system lokuqapha nokuqapha abasebenzi. Kwavela ukuqoqa uhlu oluthile lwezici olwaba yingxenye eyinhloko yenqubo yokuqapha, futhi kwakudingeka futhi ukucubungula izinkampani ezinomsebenzi ongewona ojwayelekile odinga indlela ekhethekile nokukhethwa okuningiliziwe kokusebenza. Ngaphambi kokuqala ukubalwa kwemali nokulawulwa kwabasebenzi, kubalulekile ukwazisa abasebenzi ukuthi bazoqashwa ngokusungulwa kwesimilo kanye nokuhleleka kokubuka usuku lokusebenza. Isisekelo se-USU Software, esinobubanzi obuthile bamakhono angeziwe, sikwazi ukugcina sisebenza ukulawula ukugcinwa kwesimiso sansuku zonke ngethemba lokwenza inani elidingekayo lamahora ngokomsebenzi. Osomabhizinisi bangabona ngokusobala isikrini somsebenzi ngamunye futhi babone ukuthi ubani nokuthi wenzani phakathi nosuku lokusebenza kuhlelo lwe-USU Software system. Ukubalwa kwezimali zabasebenzi nokulawulwa kwenziwa ngokukhishwa ngezikhathi ezithile kolwazi olutholiwe luye endaweni ekhethiwe ngokukhethekile ngabaphathi benhlangano. Uyakwazi ukukhiqiza kahle nangempumelelo amagrafu ku-database ye-USU Software ngokuqhathanisa nomsebenzi owenziwe ngabanye abantu. Ngakho-ke, kungenzeka, ngokwencazelo yemibala, ukubala ukuthi ngubani onakekela kakhulu imisebenzi yakhe, nokuthi ngubani osebenze ngokukhululeka, echitha isikhathi somsebenzi ezindabeni zomuntu siqu. Umdwebo ukhombisa imvamisa eluhlaza, ekhombisa umsebenzi osebenzayo wabasebenzi bakho. Ukuba khona okuphuzi kukhombisa ukuphumula okuthile nokwakheka okuhamba kancane kokuhamba komsebenzi nezinqubo ezahlukahlukene zomsebenzi. Mayelana nombala obomvu, singasho ngokuzethemba ukuthi amavidiyo omuntu siqu, imidlalo ehlukahlukene, nezinye izinhlelo ezingamukeleki kwakusetshenziswa njengokubukwa. Okuwukuphela kombala okungafanele uwunake umbala onsomi, ubukhona bawo eshadini bukhombisa isikhathi sasemini. Ngemuva kokubuyekeza lolu hlelo nsuku zonke, uyakwazi ukuqonda ukuthi ngabe zonke izisebenzi zihlobana kanjani ngokuhlukile nokwenziwa komsebenzi wazo oqondile. Ngalokhu, uzoba nesizathu esihle sokuqonda okwenzekayo, usuqhubekile nezingxoxo nabasebenzi kuze kube sekuxoshweni kwabantu abaningi abathola imali ngokungafanele, kwehlisa isimo sezomnotho senhlangano. Ngakho-ke, uzokwazi ukusungula ukulawula nokuhleleka enhlanganweni usebenzisa amakhono anamuhla ohlelo lwe-USU Software, oluzoba ngumlingani wakho nomsizi wakho isikhathi eside. Uma unanoma yimiphi imibuzo mayelana nokuphathwa kwabasebenzi nokulawula, ungahlala uxhumane nochwepheshe bethu abaholayo ukuthola usizo, abakwaziyo ukuxazulula noma iyiphi inkinga ephakanyiswe ngocingo. Usebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokubheka kanye nokulawula abasebenzi, ungakha iqembu lakho, eliqukethe abasebenzi abaqeqeshiwe nabanomthwalo wemfanelo. Noma ikuphi ukudluliswa kwemali kuzoba ngaphansi kwe-akhawunti kanye nokulawulwa kwabaqondisi benkampani, abakwazi ukubuka izitatimende namabhuku emali, ukulungisa ibhalansi nsuku zonke ekuqaleni kosuku. Uyakwazi ukunikeza abaphathi benkampani nganoma yiluphi uhlobo lokugeleza kwedokhumenti, ngokuthumela nge-imeyili. Inqubo yedatha ye-USU-Soft imininingwane etholakele futhi ikhiqiza imininingwane ehambisa imibiko yentela nezibalo ngekota ngokufaka kwiwebhusayithi yezikhungo zomthetho. Amarekhodi okuphathwa kwabasebenzi nokulawulwa kwezimali kusiza amabhizinisi amaningi ukuthi asinde esikhathini esinzima ngayo yonke indlela, esidinga ukulawulwa njalo nokuxhaswa kwezezimali. Abathuthukisi bohlelo lwesistimu ye-USU Software badala amathuba ezisebenzi kanye nezokuqapha kunoma yiziphi izinkampani ezifometha nezikala usizo. Ukuhluka kwe-freeware kulele ekumisweni kwayo okulula, okuqondakalayo ngokusebenza ngaphandle kosizo lochwepheshe, kanye nesisekelo se-USU Software ngamakhono ayo anezici eziningi enza izinqubo eziyinkimbinkimbi kakhulu emsebenzini. Kukhona ukulungiselelwa ohlelweni lwe-USU Software, olungalungiswa uma kunesidingo esiphuthumayo ngokungeza amabhokisi wokuhlola ukuze unike amandla futhi ukhubaze izinketho ezahlukahlukene ngokubona kwakho. Izinkampani eziningi, ngaphandle kwezinga lebhizinisi labo, zifuna ukusungula isisekelo se-IMS esinamandla okulawula nokuqapha okwengeziwe kokuhamba kwemibhalo esezingeni eliphezulu futhi esebenza kahle. Ngokushintshela emsebenzini wokude, isisekelo sonke somsebenzi weqembu lakho siyehluka ohlelweni lwe-USU Software, olusiza abasebenzi ukuthi bahlanganyele. Ngokuthengwa kwe-USU Software system accounting yenkampani yakho, uyakwazi ukugcina amarekhodi wabasebenzi futhi ulawule ikhwalithi yomsebenzi owenziwayo kanye nenkambiso yansuku zonke.
Kuhlelo, uyakwazi ukuzakhela isisekelo samakhasimende akho siqu nemininingwane yasebhange yezinhlangano ezisemthethweni. Kwabakweletwayo ngendlela yabakweletayo nabakweletayo, uqala ukwenza imibhalo yokuqinisekisa inani lesikweletu. Izivumelwano zamafomethi nezinhloso ezahlukahlukene ziyakwazi ukwakhiwa ku-freeware ngokunwetshwa kwesikhathi sokusetshenziswa njengoba kudingeka. Izimali okungezona ezokheshi nezokheshi zichithwa ngaphansi kolawulo olusondele lwabaphathi.
Ohlelweni, ugcina amarekhodi wabasebenzi abalawula futhi baphathe ukwenziwa kwezincazelo zabo zomsebenzi eziqondile. Kunenqubo yokusungula esiza ukukhomba amagama ezimpahla anqunyiwe ngobuningi endaweni yokugcina impahla nasemagcekeni. Usebenzisa inqubo yokungenisa, ungaqala ngokushesha ukukhiqiza imibhalo ku-database entsha ngemuva kokudlulisa okusele. Ngaphambi kokuba uqale ukukhiqiza imibhalo ku-database, udinga ukuthola ukufinyelela komuntu siqu ngendlela yokungena ngemvume nephasiwedi yabasebenzi abakhona. Ngokumiswa okulula nokuqondakalayo, ungazifundela ukusebenza ngokwakho ngaphandle kosizo lochwepheshe. Abasebenzisi bayakwazi ukwakha ukuhamba komsebenzi okudingekayo ngesimo semibiko ngenzuzo yamakhasimende ajwayelekile.
Uhlobo lwesivivinyo sedatha lusiza ukutadisha okusheshayo kokusebenza ngaphambi kokuthenga i-freeware eyinhloko. Uhlelo lokusebenza lweselula oluthuthukisiwe kunoma yiluphi ibanga lusiza ukugcina amarekhodi abasebenzi kanye nokulawula ukuhambisana nemisebenzi yabo eqondile.
Imilayezo yamafomethi ahlukahlukene yazisa ngokuphelele amaklayenti ekubalweni kwabasebenzi njengokulawula.
Kukhona ukudayela okuzenzakalelayo, ngosizo lwayo okungenzeka, egameni lenkampani, ukwazisa amakhasimende nge-accounting accounting kanye nokulawulwa kwabasebenzi.
Ama-terminals akhethekile akwazi ukwamukela ukudluliswa kwemali okuhlukahlukene okutholakala endaweni elula ngaphakathi kwedolobha. Idizayini yesisekelo ithuthukiswa ngesitayela sesimanjemanje esiza ukuheha inani elikhulu labantu abafuna ukuthenga i-freeware. Ukukhulisa ijubane lokuthayipha kusiza ukufaka isikhombisi enjini yokusesha ngokufaka igama lesikhundla. Uyakwazi ukubuka umqaphi wesisebenzi ngasinye ngokuhlonza isimo sakhe sengqondo ngezibopho zakhe eziqondile zomsebenzi. Ukuqhathanisa ukusebenza kwezemfundo nezinga lokusebenza phakathi kwabasebenzi kuzovumela umsebenzi okhethekile ku-database. Uhlelo olwehlukile lwemidwebo, imidwebo, namatafula kungadalelwa abasebenzi ukuthola izinga lokusebenza.
Kukhona umsebenzi okhethekile wokuqashelwa kokubukeka, okuzokuvumela ukuthi ubone ama-initials esivakashi emnyango wesakhiwo.
Enkambeni yokwenza imisebenzi yomsebenzi, uqala ukulayisha imininingwane oyitholile kudiski ekhishwayo uma kwenzeka kuvuza noma kunesimo esiphuthumayo. Uhlelo lukusiza uqonde noma imiphi imibuzo ephathelene nokuphathwa kwabasebenzi nokulawula, ukuba namakhono wokuqapha wanamuhla. Ngokukhokhelwa kwabasebenzisi, abasebenzisi bangenza ukubalwa okukhethekile ngokuthola amabhonasi angeziwe ngokwesitatimende. Abaqondisi bathola imilayezo evela kumakhasimende ngempendulo ngokusebenza kwabasebenzi nekhwalithi yesevisi yamakhasimende.